Baahi loo qabo Kummanaan macallimiin ah - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Ardey fasalka koowaad iyo macallimiin fasal ku jira. sawir: Jonas Ekströmer/TT
Baahi loo qabo Kummanaan macallimiin ah
La cusbooneeyay måndag 18 december 2017 kl 15.35
La daabacay måndag 18 december 2017 kl 15.00
Shanta sannadood ee foodda innagu soo haysa ayey iskuullada iyo goobaha xannaanada dhallaanku u baahan doonaan sidii ey ku shaqaaleeyn lahaayeen 77 000 oo ah shaqo buuxda.
Sida ku cad dib u qoondeeynta saadaalinta baahida macallimiinta ee wakaaladda iskuullada sannadaha foodda innagu soo haya. Waxay middaasi macnaheedu tahay iney saadaalintii kor u kacday 7 000 oo macallin wixii ka dambeeyay saadaalintii ka horreeysay muddo laba sannadood iminka ay ka soo wareegeen.
Iney kor u kaceen tirada baahida macallimiinta ee mustaqbalka ayaa salka ku heeysa kor u kaca tirada bulshada. Inay baahidu ugu wayn tahay shanta sannadood ee foodda innagu soo haysa waxay sidoo kale la xiriirtaa iney macallimiinta cusub ee jaamicadaha ka soo baxa sannadaha soo socda bedeli doonaan kuwa iminka macallin-nimada ku shaqeeya ee aan shahaadada u laheyn..
Baahida ugu wayn waxay ka jirtaa dugsiyada hoose dhexe iyo goobaha xannaanada.
Illaa iyo sannadka 2031 waxaa loo baahan yahay macallimiin gaarsii-san 187 000.
Haddii aan wax laga bedelin xawliga iminka lagu socdo ee tirada macallimiinta jaamicadaha ka soo bixi doona illaa iyo sannadka 2031 oo gaarsiisan 145 000, waxay hor seedi doontaa 80 000 oo baahi macallimiin loo qabo muddo ey iminka ka harsan tahay 15 sannadood, sida ay qortay wakaaladda iskuulladu.
"Waa in dhammaan gacan laga geeysto sidii kor loogu qaadi lahaa xiisaha howsha macallin-nimada iyo iney goobaha wax-barashadu noqdaan kuwo soo jiidasho mudan, sida uu qoraal saxaafadeed ku sheegay agaasimaha guud ee wakaaladda iskuullada Peter Fredriksson.